एक कार्यक्रम परिचारिका को रूप मा काम गर्न को लागी6सुझावहरु गठन र अध्ययन
माइट निक्यूसा | 09/06/2021 20:51 | अद्यावधिक गरियो 09/06/2021 22:18 | काम बन्द गर्नुहोस्
के तपाइँ घटना परिचारिकाको रूपमा काम गर्न चाहानुहुन्छ? यो एक यस्तो काम हो जसले धेरै क्यारियर अवसरहरू प्रदान गर्दछ किनकि कम्पनीहरूले धेरै कर्पोरेट घटनाहरू समात्दछन्। प्रशिक्षण र अध्ययनहरूमा तपाईंसँग कार्यक्रम परिचारिकाको रूपमा कार्य गर्नको लागि छ सुझावहरू छन्।
1 १. तपाईंको रिज्युमे र तपाईंको कभर पत्र लेख्नुहोस्
2 २. कार्यक्रम परिचारिक पाठ्यक्रम
3 Event. घटना होस्टिसहरूका एजेन्सीहरू
4 Job. कार्य होस्टिसेजहरूको लागि रोजगार प्रस्ताव
5 F. मेला र कांग्रेसहरूको पात्रो
6 Yourself. तपाईको व्यक्तिगत ब्रान्ड आफैमा भिन्नता राख्नुहोस्
१. तपाईंको रिज्युमे र तपाईंको कभर पत्र लेख्नुहोस्
जस्तो अन्य कुनै पेशामा, क्राफ्टिaए पाठ्यक्रम Vitae निजीकृत यस क्षेत्र मा रोजगार खोजी बृद्धि गर्न कुञ्जी छ। पाठ्यक्रम मा उल्लेख प्रशिक्षण र अनुभव उद्देश्य संग प be्क्तिबद्ध हुनु पर्छ घटना परिचारिकाको रूपमा काम गर्नेबाट।
त्यो हो, ती पाठ्यक्रमहरू थप नगर्नुहोस् जुन तपाईंको व्यक्तिगत ब्रान्डमा मूल्य थप गर्दैन। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका घटनाहरू छन्। कresses्ग्रेसहरू विश्वविद्यालयहरूमा अक्सर आउँछन्। अर्कोतर्फ, कम्पनीहरूले कर्पोरेट घटनाहरू पनि गर्छन्।
२. कार्यक्रम परिचारिक पाठ्यक्रम
विशेष प्रशिक्षणले तपाईका लागि ढोका खोल्छ किनकि यी सुविधाहरूको कार्यक्रमले उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिन्छ जुन यस व्यवसायको विकास गर्न चाहान्छन्। त्यहाँ धेरै सीपहरू र दक्षताहरू छन् जुन यो काम गर्दछन् उनीहरूले देखाउनु पर्छ। भाषाहरूको ज्ञान कुञ्जी हो, उदाहरणका लागि, कार्यक्रमका सहभागीहरूले अंग्रेजी, फ्रेन्च वा जर्मन भाषा बोल्न सक्छन्। सामाजिक कौशलले पनि व्यावसायिक उत्कृष्टता देखाउँदछ जसले इष्टतम ग्राहक सेवा प्रस्ताव गर्दछ।
Event. घटना होस्टिसहरूका एजेन्सीहरू
त्यहाँ परियोजनाहरू छन् जुन यस क्षेत्र मा विशेष छन्। एजेन्सीहरू जसले विभिन्न कार्यक्रमहरूको कार्यक्रममा सहयोग गर्दछ र जसमा तपाइँ तपाइँलाई आफ्नो कभर पत्र पठाउन तपाइँको CV पठाउन सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट को माध्यम बाट तपाई बिभिन्न एजेन्सीहरु को बारे मा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। प्रत्येक परियोजना को वेबसाइट र सामाजिक नेटवर्क जाँच गर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् जुन तपाईं स्पष्ट गर्न चाहानुहुन्छ भने, एजेन्सीको वेबसाइटमा यस उद्देश्यका लागि प्रदान गरिएको साधनहरूको माध्यमबाट संस्थालाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
Job. कार्य होस्टिसेजहरूको लागि रोजगार प्रस्ताव
अनलाइन काम प्रस्ताव सक्रिय रोजगार खोज मा एक अनिवार्य स्थान ओगटेको छ। यी अनलाइन च्यानलहरूको बारम्बार परामर्श मार्फत तपाईं विशेष विज्ञापनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, कार्य विवरणको लागि ध्यानपूर्वक विज्ञापन पढ्नुहोस् र आवश्यकताहरू जुन आफैले चयन प्रक्रियामा प्रस्तुत गर्नेहरू द्वारा पूर्ण गर्नुपर्दछ।
F. मेला र कांग्रेसहरूको पात्रो
यदि तपाइँ घटना परिचारिकाको रूपमा जान चाहानुहुन्छ भने, यो सिफारिश गरिन्छ कि तपाइँलाई सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू बर्ष सूचित हुन सूचित गर्नुहोस्। तपाईं विभिन्न शहरहरूमा घटनाहरू पाउन सक्नुहुन्छ। कुन इकाईले कार्य भन्छ? तपाईं सायद सक्नुहुन्छ तपाईंको सीभी पठाउनुहोस् ताकि उनीहरूले भविष्यको समारोहहरूमा तपाईंको प्रोफाइललाई खातामा लिन सक्नेछन्.
नेटवर्किंग आज काम खोज्नको लागि महत्वपूर्ण छ। यो घटना परिचारिकाको रूपमा काम गर्नका लागि उपयोगी छ, किनभने अन्य प्रतिभाहरू जुन तपाईंको सम्पर्कको नेटवर्कको हिस्सा हो पनि तपाईंलाई यो पेशासँग सम्बन्धित शीर्षकहरूको बारेमा जानकारी दिन सक्दछ।
यी प्रकारका घटनाहरूमा भाग लिनाले घटना परिचारिकाको पेशालाई राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्दछ। यी पेशेवरहरूको सल्लाह महत्वपूर्ण छ किनकि उनीहरूले त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिलाई घनिष्ठ उपचार प्रदान गर्दछ।
Yourself. तपाईको व्यक्तिगत ब्रान्ड आफैमा भिन्नता राख्नुहोस्
तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत ब्रान्ड तपाईको पुनःसुरु भन्दा बाहिर बनाउनु हुन्छ। तपाईं आफ्नो व्यवहार को माध्यम बाट आफ्नो व्यावसायिकता संचार। समयनिष्ठा एक घटना परिचारिकाको रूपमा काम गर्नेहरूमा जिम्मेदारीको अभिव्यक्ति हो। यो पनि सिफारिश गरिएको छ कि यस प्रोफाइलसँग टोलीको रूपमा काम गर्ने इच्छा छ। प्रोजेक्टहरूमा अन्य पेशेवरहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस् जुन एक क a्ग्रेसलाई सफल बनाउँदछ।
कार्यक्रम होस्टेसको रूपमा काम गर्नको लागि पाठ्यक्रम लिनुका साथै तपाई सार्वजनिक बोल्ने कार्यशालामा पनि भाग लिन सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले, तपाईं नयाँ कौशल, स्रोतहरू र दक्षताहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई तपाईंको उत्कृष्ट संस्करण बढाउन मद्दत गर्दछ।
यस प्रोफेशनल लक्ष्य प्राप्त गर्न तपाईं अरू के विचारहरू प्रशिक्षण र अध्ययनमा साझेदारी गर्न चाहनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » अध्ययन » काम बन्द गर्नुहोस् » कार्यक्रम परिचारिकाको रूपमा कामका लागि for सल्लाहहरू